टाइम्स अफ नेपालः समाचारपत्रिका आँगनमा मात्र हैन अब मोबाईलमा पनि
काठमाडौँ, १५ जेठ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । यो क्रमले पाठकहरुलाई सुसुचित हुने अवसर प्राप्त भए तापनि कहिलेकांही पाठकहरुलाई समस्या पनि पर्ने गरेको छ, कसको समाचार पत्याउने ? अझ कतिपयलाई लाग्छ– यति धेरै सञ्चारमाध्यम छन्, कतिवटा पो हेर्ने ?
साथै, एउटै खाालका समाचार विभिन्न स्रोतबाट प्रकाशित हुन्छ । यति धेरै लेख छन्, आफुलाई चित्त बुझ्ने लेख कता खोज्ने होला ?
यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर लिएर हालसालै ‘टाइम्स अफ नेपाल’ एप सार्वजनिक गरिएको छ । यो एपमा देश-विदेशका समाचार बिभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरी क्याटेगोराइज गरेर पाठकवर्गलाई सुसुचित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ ।
यस एपमा नेपालका २० भन्दा धेरै विश्वसनीय समाचार पोर्टलहरुका समाचारहरु इन्टिग्रेट गरिएका छन् । उक्त अत्याधुनिक एपमा ‘तपाईका लागि’ भन्ने पृष्ठ रहेको छ, जस्मा पाठकले रुचाएका समाचार मात्र देखिन्छन् । यो सुविधाले पाठकको रुचीका विषयका समाचार एउटै पृष्ठमा पढ्न पाइन्छ ।
पाठकीय रुचिअनुसार सामग्री पस्कन यस एपमा विभिन्न स्रोतका समाचारहरुलाई वर्गीकरण गरेर राखिएको छ । एउटै समाचार विभिन्न स्रोतबाट आएपनि यस एपले सबैलाई एउटै पृष्ठमा राखिदिन्छ । यसबाट पाठकले विभिन्न स्रोतमध्ये आफुलाई विस्वश्नीय लाग्ने माध्यम छनौट गर्न सक्छन् ।
यतिमात्र होइन, सधैं पाठकलाई समाचार पढिहाल्ने फुर्सद पनि नहुन सक्ने कुरालाई पनि एपले मध्यनजर गरेको छ । त्यसैले एपमा पछिका लागि समाचार सेभ गर्न मिल्ने विकल्प पनि दिइएको छ । प्रयोगकर्ताको आँखाको स्वास्थ्य र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै यो एपमा डार्क थिम र लाइट थिम दुवै प्रयोगमा छन् । अनि एपलाई अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रयोग गर्न मिल्छ ।
यस टाइम्स अफ नेपाल एपमा जिनियस सिस्टम्सले गुगल तथा एप्पलका एपमा प्रयोग गरिएको जस्तै प्रविधि प्रयोग गरेकाले पाठकलाई विश्वस्नीय तथा आफ्ना रुचि अनुसारको समाचार पढ्न, खोज्न, सेयर गर्न तथा भविष्यका लागि सेभ गर्न अत्यन्तै सहज हुने सञ्चालकले जिकिर गरेका छन् ।
जिनियस सिस्टम्सले भविष्यमा ‘टाइम्स अफ नेपाल’मा विभिन्न रोचक फिचरहरु समावेश गर्ने जनाएको छ । यो एप प्लेसटोर तथा एपस्टोरमा उपलब्ध छ र यहाँ क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सकिने बताइएको छ ।
टाइम्स अफ नेपालclose
भारतले टिकटकसहित ५९ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै चीनकाे ध्यानाकर्षण
भारतभर अब डाउनलोड हुनेछैन टिकटक, गुगल र एप्पलले प्रतिबन्धलाई पछ्यायो
भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध
महिला सशक्तिकरणका लागि स्मार्टफोन प्रभावकारी
नासाको ‘टाइम-लाप्स’मा सूर्यको १० वर्ष (भिडियो सहित)
समाचार प्रकाशक कम्पनीलाई पैसा दिने गुगलको घोषणा
ह्याकरले कोरोनाको आडमा मानिसलाई बनाउँदैछन् निशाना, यी टिप्स पालना गरौं
एप्पलको आईओएस १४ सार्वजनिक, यस्ता छन् नयाँ फिचरहरू
नयाँ अनुसन्धानको निष्कर्ष- कोरोना भाइरस कमजोर हुँदैछ र आफैँ हराएर जानसक्छ
अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वासः वातावरणीय परिवर्तनले कोरोनाको स्थिरतामा असर पार्छ
गूगल डुओ एपमा अब एकसाथ ३२ जनाले भिडियो कलिङ गर्न सक्ने
अब ह्वाट्सएपबाट डिजिटल भुक्तानी सेवा, फोटो आदानप्रदान जत्तिकै सहज कारोबार
कोरोनाको उपचारमा ‘क्रमभंग’ भएको बेलायती वैज्ञानिकको दावी, औषधि पत्ता लाग्यो
कोभिड-१९ बाट बच्नका लागि मानव ‘एन्टीबडी’को खोज
‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’बारे यसो भन्छ सीरी, एलेक्सा र गुगलको भ्वाइस असिस्टेन्ट प्रविधि
चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावे बेलायतमा व्यस्त, प्रचार तीव्र
छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बसेर अब आइफोनबाट ग्रुप सेल्फी लिन सकिन्छ
ह्वाट्सएपबाट दिक्क भए प्रयोग गर्नुहोस् टेलिग्राम एप, यस्ता छन् आकर्षक फिचर
फेसबुकले थप्यो फोटो र भिडियो सङ्ग्रहसम्वन्धी नयाँ सुविधा